Oktoobar | 2009 | WEEJIDOW
Archive for Oktoobar, 2009
War Deg Deg ah: Banaanbaxyo badan oo maanta ka dhacay Soomaaliya – Magaalada Baydhabo
Oktoobar 30, 2009
Hogaamiye katirsan Islaamiyiinta Somalia ayaa shaaca ka qaaday in ay kusii jeedaan wadanka Filasdiin oo ay xoog ku haystaan Askarta Yahuuda oo Muudo 60 sana ah gumaysi u haysato.
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur Afhayeenkii hore ee Al Shabaab ayaa Khodbad dheer ka jeediyay magaalada Bayhdbao xarunta Gobalka Bay oo ay ku Mudaaharaadayeen Kumaan reer Baydhabo ah.
Abuu Masuur wuxuu sheegay in ay Ciidan xoogan u diri doonaan magaalada Qudus si ay dagaal ula galaan Ciidamada Yahuuda ee dhibaatada ka wado dhulka Barakaysan ee Qudus Sahriif.
” Qof kasta oo Muslim ah waxaan ugu baaqayaa in uu Qarxiyo Safaaradaha Mareykanka iyo Yahuuda waxaa kale oo aan balan ku qaadaynaa in aan Toogano Dadka wato Baasaboorada Mareykanka iyo Yahuuda waa kuwa dhibka ku hayo shacabkeena” ayuu yiri Abuu Mansuur oo in Mudda ah aan Codkiisa laga maqlin Warbaahinta.
Abuu Mansuur wuxuu shacabka Baydhabo u sheegay in ay Ciidan xoogan oo Awood leh u dirayaan magaalada Qudus si ay uga bar bar dagaalamaan Xoogaga Kacdoonka ka wado Filasdiin.
Waa markii ugu horaysay oo uu Abuu Mansuur sheego in ay ku wajahanyihiin dhulka Falasdiin oo ay xooga ku haystaan Ciidanka Yahuuda Arxanka daran.
War Deg Deg ah: Kooxda la dagaalameysa Dowlada KMG oo hanjabaad hor leh ku dhawaaqey
Kooxda Al-Shabaab ayaa soo saartay hanjabaado hor leh, waxayna markii ugu horeysay ku dartay wadamada ay weerari doonaan dalka Eritrea oo ay ku sheegtay in Eritrea aysan saaxiib la ahayn shucuubta iyo wadamada Islaamka.
Hanjabaada maanta ee Al-Shabaab ayaa waxay ku sheegeen inay haystaan 10 gobol oo ku yaalla koonfurta Somalia, sidoo kalena ay 8-da gobol ee kale ee ku yaalla deegaanada hoos yimaada Somaliland iyo Puntland ay qabsan doonaan.
Hanjabaadan Al-shabaab ayay maanta ka hor sheegeen dadweyne mudaharaad ka hor sameeyey xarunta maamulka Al-Shabaab ee Marka.
Sh. Suldaan Maxamed Aalla Maxamed oo ka soo jeeda Digil & Mirifle oo dadkaasi banaanbaxayay la hadlayey ayaa sheegay in ay weerari doonaan wadamo ay ka mid yihiin Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Sudan, Kenya, Uganda, Ghana iyo Isreal.
Ma aha markii ugu horeysay ee ururka Al-Shabaab ay soo saaraan hanjabaado ay ku sheegayaan inay weeraro la beegsan doonaan wadamo shisheeye. Todobaadkii hore ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay weeraro ismiidaamin ah la bartilmaameedsan doonaan wadamada Burundi iyo Uganda.
Oktoobar 29, 2009
Waxaa uu qeyb weyn ka qaatay wadahadaladii Jabuuti ku dhex maray Isbaheysigaas iyo Dowladda Federaalka isagoo sidoo kalena abuuray tanaasulaad fara badan.
Haatan oo ah Wasiirka Maaliyadda waxaa sameeyay dhaqaaq muhiim ah kadib markii heshiis la galay shirkad Caalami ah oo ilaalinaysa hantida Dowladda.
Wasiirka Ganacsiga ee Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Cabdi, ayaa BBC u sheegay in heshiiskan oo hadda dhaqan gelaya uu yahay mid uu hore u saxiixay Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Haddaba dad ayaa bilaabay in ay si qaldan u fasiraan waxqabadka uu sameeyay Wasiirka Maaliyadda, kooxdaas waxay sameeyen dacaayado raqiis ah oo waxba u dhimi karin tayada waxqabadka Wasiirka.
War Deg Deg ah: Dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo ka bilowday Galkacyo
Rabshadahaani ka soo cusboonaaday Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xadka kala qeybiya Koofurta iyo Waqooyiga ayaa waxaa ay ka dambeeyen kadib markii dhawaan Maamulka Puntland ee gobolka mudug oo mudo 7 maalmood ah u qabtay ganacsatada yar yar ee wax ku dhex iibisa Suuqa Cirtooktaha ee Gaalkacyo taasoo lagu farayo in ay isaga guuraan halkaasi waxaana xiligaasi kadib Ganacsatadu ay bilaabeen in ay ka biyo diidaan.
Gudoonka Barlamanka KMG oo sheegay in ciidamada AMISOM aanay masuul ka aheeyn dhibaatooyinka shacabka ka soo gaarta dagaalada.
Gudoomiyaha Barlamanka KMG ee Soomaaliya Sheekh Aadan Max’ed Nuur Madoobe ayaa kadib kulan uu la qaatay madaxda Barlamanka KMG waxaa uu saxaafadda kula hadlay aqalka Madaxtooyada isagoo ka hadlay dagaaladii shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Waxaa gudoomiyuhu kooxaha ka soo horjeeda dowladda uu ku eedeeyay in ay madaafiic ku tuuraan fariisimo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin Wadada Makka Al Mukarama kadibna ay ka cararaan goobtii ay wax ka tuureen,waxaana uu dagaal fulaynimo ah uu ku tilmaamay dagaalkii shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Sheekh Aadan Max’ed Nuur Madoobe waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya looga fadhiyo in ay xal waara ka gaarto dagaalada iyo duqeymaha inta badan ka dhaca isagoona sheegay in Barlanku uu matalayo shacbiga oo aysan la wanaagsanayn in shacab maati ah ay dhintaan.
Hadalka gudoomiyaha Barlamanka KMG ee Soomaaliya ayaa waxaa uu ka dambeeyay xili shalay Magaalada Muqdisho ay ka dhaceen Dagaalo iyo duqeymo sababay dhimasho dhaawac dad rayid ah kuwaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa AMISOM iyo xoogaga hubaysan ee ka soo horjeeda.
Adan Madoobe wuxuu ku eedeeyey Xarakada Al Shabaab in ay madaafiic ku gamaan meelaha ay dadka rayidka ah ku noolyihyiin sida uu hadalka u dhigay isaga oo xitaa mas,uuliyadeeda saaray madaafiicda ay ku jawaabaan AMISOM iyo kuwa dowlada.
Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in safarada Madaxda Dowladda ku tagaan dalalka Dibada aanay marna u hakan doonin weerarada lagu ekeeyo, waxaana uu sheegay in AMISOM aanay qaadeyn mas’uuliyada dadka dhibaatada ka soo gaara dagaalada.
“Ma u hakan doonaan weerarada Safarada Dibada ee Madaxda Qaranka, marka ay wax soo weerarayaan Ciidamada kama hor imaanayaan shacabka ayay ku soo dhex dhuumanayaa”ayuu si kulul u yiri Aadan Madoobe.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Sheikh Aadan Madoobe ayaa sidoo kale sheegay in kulamo uu yeelanayo Baarlamaanka maalmaha soo socda ay uga hadlayaan xaalada dalka iyo dagaalada ka socda.
Xiisado caawa ka taagan deegaano hoostaga gobolka Sanaag Kadib markii galabta halkaasi ay isku dagaaleen ciidamada Puntland iyo Somaliland.
Oktoobar 28, 2009
Xiisado ayaa waxaa ay caawa ka taagantahay deegaano hoostaga gobolka Sanaag Kadib markii galabta halkaasi ay isku dagaaleen ciidamada maamulada Puntland iyo Somaliland.
Dagaalo u dhaxeeya Maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa galbta ka dhacay deegaano hoostaga Gobolka Sanaag ee Waqooyiga bari Soomaaliya iyadoo dagaaladaasina guulo ay ka sheegteen Maamulka Puntland.
Wararka naga soogaaraya degaanka Ceelbuh ee gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaal u dhaxeeya Ciidamada Maamulada Puntland iyo Somaliland oo halkaasi ka dhacay.
Dagaalka oo bilowday salaadii Casar ee Galabta ayaa waxaa la sheegayaa in uu yimid kadib markii wasiir ka tirsan Somaliland iyo ciidamo uu watay ay gaareen degmada Ceelbuh oo la sheegay in ay horay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan Puntland iyadoo xiligaasi kadib uu halkaasi ka dhacay dagaal aan la aqoon waxyaabaha dhaliyay kaasoo dhexmaray ciidamada labada Maamul.
Ilaa iyo hadda lama oga qasaaraha dagaalka hase ahaatee dadka ku dhaqan halka uu dagaalku ka socdo ayaa Shabelle u sheegay in dagaalka la isku weydaarsaday hub cul culus,waxaana wasiirka Somaliland ee ciidamadiisu ay dagaalka la galeen kuwa Puntland midooyinkii ugu dambeeyay uu indha indheynayay deegaanada hoostaga gobolka Sanaag halkaasi oo mudooyinkii ugu dambeeyay ay isku heysteen labadaasi Maamul.
Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Maamul Goboleedka Puntland C/laahi Cumar Canshuur ayaa waxaa Waajidpress u xaqiijiyay in Wafdi ka socda Somaliland ay shalay galinkii dambe soo gaareen deegaano ka tirsan kuwaasi oo galabta soo gaaray deegaanka Ceelbuuh ee gobolk Sanaag islamarkaana halkaasi uu dagaal ku dhexmaray Wafdigaasi iyo ciidanka Puntland.
Nimco Cumar waxay sheegtay in askarigaasi uu ahaa dhakhtarka aabaheed oo xilligaasi ku jiray cusbitaal ay ciidamada AMISOM ku lahaayeen Muqdisho. Nicmo waxay sheegtay in askarigaasi daaweynta aabaheed uu ku xidhay shuruud ah inuu guursado, haddii ay ka diidana uu aabaheed ka saari doono cusbitaalka.
Nicmo Cumar waxay sheegtay in markii ay qiimaysay xaaladda aabaheed oo u baahnaa daaweyn ay askarigaasi ka ogolaatay inuu guursado, isagoo sidoo kale u sheegay inuu ahaa nin Muslim ah,
Nimco Cumar waxay sheegtay in askarigaasi kadib ay ku meheriyeen laba wadaad oo Somali ah.
Nimco Cumar waxay intaas ku dartay inay si dhuumaalaysi ah ula kulmi jirtay askarigaasi, halkaasna ay uur ku qaaday. Nicmo aabaheed ayaa kadib geeeriyooday sida VOA u sheegtay, waxayna kadib sheegtay in la ogaaday guurka iyada iyo askariga taasina ay ku qasabtay inay dalka ka baxdo oo Kampala gaadho.
Nicmo Cumar oo haatan iyada iyo wiil ay dhashay kuwada sugan dalka Uganda ayaa sheegtay inay ku faraxday kadib markii ay maxkamad ku taala Uganda ay askarigaasi ku xukuntay xadhig dhan sanad iyo badh.
Nimco Cumar Sheekh waxay carabka ku dhufatay in xaallada nolosheedu ay aad u liidato isla markaana aanay wax taageero ah ka helin dowlada Uganda ama jaalliyada Somalida ee Uganda degan.
War Deg Deg ah: 6 ayaa ku dhimatay, 14 waa dhaawac hobiyeyaal maanta lagu soo dhaweeyey Madaxweynaha
Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay 14 kalena wey ku dhaawacmeen dagaalo iyo madaafiic culus oo maanta ka dhacday magaalada muqdishu .
Dagaalka ayaa bilowday markii ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladdu ay bilaabeen inay xiraan qaar ka mid ah waddooyinka magaalada si loo sugo ammaanka Madaxweynaha oo maanta Muqdisho ku laabtay.
Xaafadaha Hodan iyo Howlwadaag ayaa ka mida meelaha madaafiicda lagu doqeeyey oo dad rayada waxyeelo u geystay. Dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ka mid ahayd haweyney uur 9 bilooda lahayd oo horeyna 2 caruur ah u haysatey sida uu BBCda u sheegay ninkii haweydaasi qabay.
Garoonka diyaaradaha ayaa Hoobiyayaal lagu garaacay markii madaxweynuhu soo degeyey, hasa yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegaya in Hoobiyaalkaasi ay ku dhaceen meel u dhow Garoonka diyaaradaha.
Maahan markii ugu horeysey oo madaafiic ay isweydaarsanayaan kooxaha dagaalamaya ay dad rayada waxyeelo u geystaan, horey ayaa dad badan oo rayad ahi wax ugu noqdeen duqeymo loogeystey suuqa Bakaaraha iyo xaafado kale oo ku yaal magaalada Mugadisho.
War Deg Deg ah: Niman Culumo ah ayaa maamulka Puntland u dhiibey Dowlada Ethiopia
Oktoobar 27, 2009
Warar guux dhaafiyay Degaanada Puntland ayaa sheegaya in Shan Raga oo u dhashay degaanada ismaamulka Soomalida ee Dalka Ethopia ay ka soo dageen Dekada Boosaaso ayana saarnaayeen Dooni ka timi Dalka Yeman lagu xiray Saldhiga Dekada Boosaaso.
Shantaan Raga ayaa lagu sheegay in ay ahaayeen macalimiin shaqo doona oo wax ku soo bartay wadanka Sacuudiga ayna door bideen in ay ka shaqeestaan Jaamcadaha iyo Iskoolada ku yaal Puntland iyagoo Degaanadii ay u dhasheen ee Ismaamulka Soomaalida ee Dalkaa Ethopia ay uga soo carareer dhibaatooyinka Ciidamada Ethopia ay ku hayaan Dadka degan Dhulkaa.
Ragaan ayaa waxaa ay Culamada Diinta ee Puntland ka sheegeen masaajidada in mid ka mida loo dhiibay Ciidamada Ethopia oo ay la tageen kadib markii uu Safiirka u fadhiya Ethopia Degaanada Puntland oo ah Sarkaal Ciidan, uu yimi Boosaaso kadibna lagu wareejiyay Ninkaa ka midka ahaa Ragii Shanta ahaa ee laga qabtay Dekada Boosaaso, halka afrtii kalena aan la ogeen meel la geeyay, Maamulka Puntland oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan arimaha ay ku eedeeyeen Culamada Diinta Puntland.
Qabashada Ragaan ayaa waxay ku soo aadaysaa kadib markii Madaxweynaha DPL ee Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole, uu ka hadlay in ay jiraan Rag lagu soo tababaray dalal kale oo ay ka mid tahay Ereteriya ay doonayaan in ay Falal Amni daro ka sameeyaan Degaanada Puntland.
Dowlada Ethopia ayaa dhanka kale ugaarsi ba’an ku haysa Dad ay ku tuhun santahay in ay ka tirsan yihiin Jamhada ONLF ee dagaalada kula jirta Ciidamada Ethopia ee Deagaana Ismaamula Soomaalida Ethopia, Dadkaas ayaa gabaadyo ka dhigta Degaanada Dalka Soomaaliya ee Dowlada la’aanta ah sida ay sheegeen Dowlada Ethopia.
Maaha markii ugu horeeyey oo ciidamada Ethopia loo dhiibo Dad ka soo jeeda Degaanada Ismaamulla Soomalida oo laga qabtay Degaanada Puntland aydoo hore looga qabtay Magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo qaarkood Ragii la dhiibayna la rumeysan yahay in ay Dileen Ciidamada Ethopia halka qaar kalena lagu hayo Xabsiyada Ethopia.
Hay’adaha u dagaalama Xaquuqul Insaanka oo ay ugu horeyso hay’ada AMNESTY INTERNATIONAL ayaa ugu eedaysay ciidamada Ethiopia iney falal ka baxsan bini’ aadamnimada kula dhaqmaan shacabka ay ku tuhmaan inay gacan siiyaan dagaalyahanada Jabhadaha ka dagaalama dalkaasi.
Sidoo kale xukuumada Addis Ababa si weyn horey ay ugu dhaliileen Beesha Caalamka ku xadgudubka xaquuda maxaabiista iyo dadka ay qabtaan oo ay u geystaan jirdil heerar kala gedisan leh oo mararna sabab inay dhintaan qaar kamid ah maxaabiista ay jirdilaan askarta dalka Ethiopia.
Hubkii iyo gaadiidkii Sheekh C/raxmaan Mocow oo lala wareegay iyo saraakiisha ururka xisbul Islaam ee magaalada B/weyne oo fariin digniin ah u diray ciidamada DF ee jooga gobolka Hiiraan
Sheekh Cabdi Maxamed Cusmaan oo ah Sarkaal ka tirsan ururka Xisbul Islaam ayaa saxaafada u qiray in gelinkii dambe ee shalay ay hub ka dhigis ku sameeyeen Sheekh C/raxmaan Macow oo ahaa guddoomiyihii Maxkamadaha Islaamiga ee gobolka Hiiraan ee dhowaan ku biiray ururka Xisbul Islaamisagoo tilmaamay in aysan wax muhiimad ah lahayn in hub lagu wareejiyo urur ama xisbi uu shaqsi ka tirsan yahay.
“Markii uu ku soo biirayey xisbul Islaam ayuu balan qaaday in uu wareejinayo hubkiisa, hadana wax dhibaato ah meesha ma yaalaan” ayuu sheegay Sheekh Cabdi Maxamed Cusmaan oo intaasi ku daray in ay socdaan dadaalo looga wareejiyo hub weli ku harsan gacanta Sheekh C/raxmaan Mocow si loogu adeego islaamka sida uu warka u dhigay.
Dhinaca kale Sheekh Cabdi Maxamed Cismaan waxaa uu ka waramay xaaladaha ammaan ee gobolka Hiiraan, wuxuuna tilmaamay in xilligan uu yahay mid inta badan hagaagsan, wuxuuna intaasi ku daray in ururka Xisbul Islaam uu dhameystiri doono xaqiijinta guud ahaanba ammaanka gobolka Hiiraan.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Oktoobar, 2009.